Nayakhabar.com: यात्रुबसमा हवाई जहाजसरह सुविधा !
यात्रुबसमा हवाई जहाजसरह सुविधा !
यातायात व्यवसायीले ठूलो लगानीमा सुविधासम्पन्न बस चलाउन थालेका छन्। पोखरा जगदम्बा ट्राभल्सले नेपालमा सञ्चालित यात्रुबाहक सवारीको तुलनामा निकै सुविधासम्पन्न बस भित्र्याएको दाबी गरेको छ।
जगदम्बाका अध्यक्ष केशवप्रसाद अधिकारीले उनको कम्पनीले चलाएको बसमा यात्रा गर्दा यात्रुले हवाइजहाजमा जत्तिकै सुविधा पाउने बताए। उनका अनुसार आरामदायी सिट भएको बसमा मिनीबार पनि छ। यात्रुले चिया, कफी र चिसो पेय गाडीमै पाउनेछन्।
२१ सिटे बसको क्याबिनभित्र 'मिनीबारु छ। यसमा फ्रिज र चिया, कफी मेकर छ। यात्रुले ब्रेकफास्ट गाडीमै पाउने र लन्च राजमार्गका होटलमा व्यवस्था हुने उनले बताए। 'एसी, हिटर, पंखा, आरामदायी सिट यो बसका प्रमुख सुविधा रहेको उनले बताए। 'मिनीबार, ब्रेकफास्ट, बस्ने सिट, एसी, हिटर लगायत सुविधाले जहाजकै यात्रासरह बनाउनेछ,' उनले भने।
उनका अनुसार यात्रुले कुनै सुविधा चाहिए सिटको स्विच दबाउनुपर्नेछ। बसमा रिमोट कन्ट्रोलरबाट चल्ने सिट छन्। रिमोटबाटै बसको सिट फोल्ड गर्न, उचाल्न र तल झार्न सकिनेछ। अधिकारीका अनुसार बसका हरेक सिटका लागि हिटर, कपडा झुन्डाउने, पत्रिका र किताब राख्ने विशेष ठाउँ छ। चियाकफीको गिलास राख्न छुट्टै ठाउँ बनाइएको छ। ओर्लने बेला यात्रुलाई 'डेजर्टु खान दिइनेछ। बस एकैठाउँबाट चढ्ने र एकठाउँमै मात्र ओर्लने व्यवस्था मिलाउने अधिकारीले बताए।
यो बसको पछाडि 'एयर सस्पेन्सन राखिएको र यले बसलाई खाडलमा पर्दा बेसरी हल्लिन नदिने उनले बताए। चिया–कफी पिउँदा हल्लिने डर भएकोले एयर सस्पेन्सन राखिएको उनले बताए।
बसको मूल्य प्रतिगोटा १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ परेको अधिकारीले बताए। कम्पनीले हाल यस्ता बस २ वटा ल्याएको छ। भारतको अशोक लेल्यान्ड कम्पनीमा निर्मित बसको प्रत्येक सिटका लागि करिब ८५ हजार भारतीय रुपैयाँ परेको उनले बताए। 'साढे ३ करोड रुपैयाँमा दुइवटा बस भित्र्याएका छौं। सुविधाकै लागि यतिधेरै लगानी गरेका हौं,' उनले भने।
बसभित्र पार्केटिङ गरिएको छ। कुनै पनि झ्याल खोल्न मिल्दैन। एसी, पंखा, वाइफाई सुविधा बसभित्रै उपलब्ध हुने उनले बताए। अधिकारीका अनुसार बस पोखरा–काठमाडौं–पोखरा रुटमा चल्नेछन्। नागरिक दैनिकमा खवर छ ।
Posted by Kalpana at 00:11